About Us - Ningbo Scojet Import & Export Co., Ltd.
Scojet dia vokatry famolavolana, machining marina tsara sy ny orinasa mpamokatra entana iraisam-pirenena ao an-toerana sy ny orinasa mitondra vahaolana amin'ny orinasa mpamokatra entana, eran-mpandraharaha amin'ny alalan'ny OEM lehibe mpanamboatra.
Scojet, Inc. nanokatra ny varavarana tamin'ny 2001 toy ny vokatra famolavolana raharaham-barotra, tamin'ny 2004 dia nanomboka ny asa eny ifotony iraisam-pirenena, 2008 dia nividy ny CNC milina voalohany ary nanomboka ny US machining asa, 2011 izahay nanomboka ny asa machining aerospace any Etazonia sy nahazo ny AS9100 / ISO9001 certifications, 2015 izahay, nanokatra Ningbo Scojet Import Export Company in Ninghai Shina hanampy mpamatsy amin'ny kalitao fanatsarana, injeniera fanohanana sy ho haingana ny famatsiana sy mahomby kokoa.
Isika no manampy amin'ny fitondrana ny orinasa vokatra ny tsena nandritra ny 16 taona. Scojet maherin'ny 60 eo ho eo ny tetikasa isan-taona avy amin'ny foto-kevitra ny famokarana eo amin'ny sehatra toy ny aerospace, fiara, bozaka sy ny zaridaina, mpanjifa vokatra sy ny orinasa ara-pitsaboana.
Scojet dia tena ara-teknika, tia ady fitomboana raharaham-barotra miaraka amin'ny tantaran'ny mahomby famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana tetikasa ho ambanin'ny fehin.
Ny Shina orinasa miorina varotra sy ny mpiara-miombon'antoka mamela antsika mba hitondra eran-orinasa mpamokatra entana ny orinasa mitady hifaninana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no misy ao ankehitriny. Maro amin'ireo mpiara-miombon'antoka ihany koa voamarina ISO9001 sy ireo rehetra efa nandalo ny dingana fahaizana.
CNC nihodina ka nijoro ny hafakely alloys toy ny Rene, Inconel, Waspaloy & Titanium, Soisa Machining, Product Design, plastika / fingotra koronosy, Metal mandatsaka: Sand, Die sy fampiasam-bola, Mechanical Control Cables, Light Systems anisan'izany Halogen sy nitarika, nohitsakitsahiko sy Metal FABRICATION.
Manome isika samy hafa ny vokatra manara-penitra sy ny tsara vidiny. Faly izahay ny hahazo ny Inquiry ary hamaly anao raha vao araka izay azo atao. Tsy miala amin'ny fitsipiky ny "Quality aloha, asa fanompoana voalohany, mitohy ny fanatsarana sy ny zava-baovao hihaona amin'ny mpanjifa" Fa ny fitantanana sy ny "Zero tsiny, aotra fitarainana" Toy ny toetra tanjona.